कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य समायोजन | आर्थिक अभियान
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य समायोजन
पुस २६, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले सोमवार कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको हकप्रद शेयरको मूल्य समायोजन गरेको छ ।
नेप्सेले १५० प्रतिशत हकप्रद शेयरको समायोजनपछि शेयरमूल्य रू. ४५४ तोकेको छ ।
कम्पनीको अघिल्लो कारोबारको दिन अर्थात् आइतवार कायम अन्तिम शेयरमूल्य रू. ९८७ को आधारमा शेयरमूल्य समायोजन भएको हो ।
कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन प्रयोजनार्थ सोमवार बुकक्लोज गरेसँगै नेप्सेले शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो ।
कम्पनीले १ बराबर १ दशमलव ५ कित्ता शेयरको अनुपातमा रू. ३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २० करोड रहेको छ । संस्थापकतर्फ ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणतर्फ ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको उक्त कम्पनीको हकप्रद पश्चात चुक्तापूँजी रू. ५० करोड पुग्नेछ ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू. ६४ करोड र जारी पूँजी रू. ५० करोड रहेको छ । हकप्रद पश्चात कम्पनीको जारी पूँजी बराबरको रकम कायम हुनेछ । यो हकप्रद शेयर माघ २७ गतेसम्म विक्रीमा रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
यो शेयर विक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुसँगै मेरो शेयरमार्फत पनि यो शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको हकप्रद शेयरलाई केयर रेटिङ नेपालले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी बी प्लस आईएस रेटिङ प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा कम्पनीले चुक्तापूँजी रू. ५५ करोड कायम गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीको रू. ११ लाख ५५ हजार खुद नाफा रहेको छ भने जगेडा कोष रकम रू. १४ करोड १६ लाखभन्दा बढी छ । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. १ दशमलव १३ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४५ दशमलव ९२ छ ।
तीन ओटा कम्पनीको साधारण सभा स्थगित, कारण के त ? [२०७८ माघ, १४]
मल्टीपर्पस फाइनान्सले कमायो रू. ४६ लाख २७ हजार नाफा [२०७८ माघ, १४]
खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएसँगै समीट लघुवित्तको नाफा शतप्रतिशत बढ्यो [२०७८ माघ, १४]